Horudhac: Juventus vs Napoli… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee Supercoppa Italiana) – Gool FM
(I Petali) 20 Jan 2021. Xafiiltanka adag ee labada dhinac ee Waqooyiga iyo Koonfurta, Juventus iyo Napoli ayaa ku kulmi doona caawa garoonka Mapei Stadium, kulankii 33-aad ee Supercoppa Italiana.
Iyadoo koobkii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedka doonaysa inay gacanta ku dhigto, kooxda haysata horyaalka Serie A ayaa la ciyaari doonta kooxdii xilli ciyaareedkii hore ku guuleysatay Coppa Italia – ku celiskii final-kii koobkii cajiibka ahaa June ka dhacay Rome.
Tartanka: Italy – Supercoppa Italiana
Garoonka: Stadio Mapei – Citta del Tricolore
Weston McKennie, Dejan Kulusevski iyo Federico Bernardeschi ayaa la filayaa inay ku soo bilowdaan kulankan kaddib markii ay kursiga keydka soo fariisteen kulankii Axaddii.
Merih Demiral ayaa shaxda looga saaray sababo dhaawac, iyadoo afar kale ay ku maqnaayeen sababo la xiriira Korona Fayras.
Gianluca Frabotta ayaa ka mid noqon doona kooxda inkasta oo aanu boqolkiiba boqol taam ahayn kaddib markii uu dhaawac ka soo gaaray kulankii Inter.
Fabián Ruiz lama heli karo kaddib markii uu haleelay caabuqa Korona Fayras.
Dries Mertens ayaa bedel ku soo galay kulankii Axaddii, waxaana markale la filayaa inuu ku soo bilowdo kursiga keydka kulanka caawa.
>- Napoli ayaa ku guuleysatay Coppa Italia xilli ciyaareedkii hore markii ay wajaheen Juventus, natiijada oo loo baahday waqti dheeri ah ayaana ku soo dhammaatay 0-0, sidaasi darteed waxaa guuleystaha lagu go’aamin kaddib markii rigooreyaal la dhigay.
>- Loollanka u dhexeeya labadaan kooxood waa mid weyn, kulankii ugu dambeeyay ee Serie A waxaa lagu ciyaaray Naples, waxaana ay Napoli ku badisay 2-1.
>- Afar ka mid ah shantii kulan ee ugu dambeeyay oo labadaan kooxood dhexmara ayaa soo dhammaaday iyadoo labada kooxba ay goolal dhaliyeen.